အဆိုပါ undesired - အပိုင်း 20 | Apg29
အဆိုပါ undesired - အပိုင်း 20
တစ်ဦးမလိုချင်တဲ့ကလေးကအဖြစ်ကိုငါ့ကလေးဘဝ၏ Harrow ဇာတ်လမ်း၏အဆက်။
အကြှနျုပျ၏စာသင်ခန်းငါ Torpa ကျောင်းမှာဝင်သောအခါငါရှိခဲ့တယ်ငါ့အဟောင်းအတန်းဖော်စာသင်ခန်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ oblong အဆောက်အဦး၏ထောင့်ထဲမှာစာသား၌ထအဆုံးသတ်နေချိန်မှာသူတို့ဟာအထက်တန်းကျောင်းအဆောက်အဦး၏အလယ်၌ထအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဟောင်းကိုလူတန်းစားဖို့ငါရှည်လျားသောစင်္ကြံထဲမှာတစ်ဝက်ကိုသွား, ပြီးတော့ညာဘက်လှည့်ခဲ့ရသည်။ ဒါဟာငါဒီတော့တစ်ခါတစ်ရံပြုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
တဦးတည်းအခါသမယတွင်, ငါခရစ်ယာန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးငါနှစ်ပေါင်းများစွာအစောပိုင်းက, ကျောင်းပစ်ခတ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးရန်ပွဲသို့ဖြစ်လေသောကောင်လေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုပြောဆိုသောအဘယ်အရာကိုသတိရကြဘူးဒါပေမယ့်ငွိမျးခမျြးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကခုံတန်းရှည်မှာရပ်နားမှာအခြားကျောင်းသားများ၏လူအစုအဝေးတို့တှငျအပြောဆိုသောအဓိက, ကျောင်း Locker တွေနှင့်အကျီရုတ်တရက်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်ငါ့ဆီသို့ချီ လာ. နှင့်ကပြောပါတယ်ပါလိမ့်မယ်:
ကျွန်မအံ့အားသင့်ခဲ့လို့ပြောအဘယ်သို့သိရုံတိတ်ဆိတ်ခဲ့ကြဘူး။ ခရစ်ယာန်သူတောင်းပန်ချွတ်သှားပွီး။ ပွုံးရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါသူကဆိုသညျကားအဘယျမသိခဲ့ပါ။ ခုနှစ်မှစ. မိန်းကလေးကသဘောတူ။ ကျွန်မသူမသူမသိပေမယ့်ငါ့ကိုရန်အလွန်နာကျင်ခဲ့ပါတယ်။
ငါသည်ငါ့ဆီဥနှင့်ချောကျိကျိဆံပင်များကညှဉ်းဆဲသောကြောင့်ငါ့ကိုထိခိုက်စေ။ ထိုသို့အဆိုပါဆေးတစ်လက်, ငါကပိုရေချိုးသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးပိုပြီးမကြာခဏကကိုလျှော်သင့်ပါတယ်သိတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်မရဲ့မွေးစားမိခင်ဘို့မျှမရှိ။ အဖြစ်မကြာမီငါရေချိုးခန်းယူသို့မဟုတ်ငါ့ဆံပင်ဆေးကြောဖို့လိုခဲ့သကဲ့သို့ငါကမရကြဘူး။ ငါရေချိုးခန်းယူနိုင်ဘူးငါ့ချောကျိကျိဆံပင်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကျောင်းတွင်ညှဉ်းဆဲသောကြောင့်ငါအိမ်မှာခံစားခဲ့ရသည်။ ငါစိတ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ထိုသို့မကောင်းတဲ့ခံစားခဲ့ရနှင့်ပင်တဖန်ငါ့ပြီးသားအနိမ့် Self-လေးစားမှုအတွက်မသေချာမရေရာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကသူမ၏ဆင်းရဲသားကိုနောက်ခံငါ၏မွေးစားမိခင် opsykologiska အပြုအမူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်အရာရာအပေါ်ကယ်ဖို့သင်ယူခဲ့သည်။ ဤသည်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်သူမငွေရေးကြေးရေးအချွတ်ကောင်းစားခြင်းရှိ၏ပင်အခါ, နှစ်ပေါင်းများစွာသူမ၏နှင့်အတူလိုက်လိမ့်မယ်။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူဘာမှရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့အဟောင်းအဝတ်ခန့်သွား၏။ သူမသည်အသစ်နှင့်လတ်ဆတ်သောအရာတစ်ခုခုဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်ထက်ပိုခဲ့ပေမယ့်သူမလုပ်ခဲ့တယ်ဘူး။
သို့မဟုတ်သူမ၏အပြုအမူသူမသည်ငါ့မွေးစားဖခင်ကြောက်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမသိပေမယ့်သူမနှစ်ပေါင်းများစွာသိသိသာသာသူ့ကိုအားဖြင့်ရှုံးခဲ့သညျ။ သူကနားမထောင်ရသောအခါသူမသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်တို့ကိုကလေးများမှသူမ၏ခင်ပွန်းအကြောင်းကို unflattering အမှုအရာလို့ပြောလိမ့်မယ်။
ငါကစဉ်းစားတဲ့အခါ, သူကသူမ၏အကြောင်းကိုထိုကဲ့သို့သောဘယ်တော့မှအမှုအရာ, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူယေဘုယျအားဘယ်တော့မှအလျှင်းမကပြောပါတယ်။ တစ်ဦးနှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်သူသည်မိမိကားကိုအတူတစ်နေရာရာမှာသွားနိုင်ဘူး။ သူဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ရှိရာအကြှနျုပျ၏မွေးစားမိခင်ကိုသိဘူး။ ကြောင်း အကယ်. သူမကျွန်တော်တို့ကိုကလေးများညည်းညူ, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုတိုက်ရိုက်ကပြောသည်ဘူး။ ငါငြင်းခုံသူတို့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီအပြုအမူဟာအဓိကမျက်ဒေါသဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုအကြားဆက်သွယ်ရေးကိုလုံးဝအသေကောင်ကြီးကငါနှင့်အတူကြီးပြင်းသောဤဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျအချင်းချင်းစကားပြောဘူး။
အကြှနျုပျ၏မွေးစားဖခင်ကသူတိုင်အောင်တဆယ်လေး၏အသက်အရွယ်ကနေပြုမိခဲ့သောတစ်ပိုက်သောက်သည်, ဒါပေမယ့်သူကအရက်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာစားစရာခန်းထဲမှာကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ဗော့ဒ်ကာနှင့်အခြားအရက်ပုလင်းခဲ့ပေမယ့်သူကသူတို့အထဲကမိမိကိုမိမိသောက်ပေမယ့်တစ်ခါသာအထဲတွင်သူကနည်းနည်း schnapps လှူသောအိမ်တွင်ဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်ဘူး။
ယခုမူကားနောက်ကျောငါ့အချောကျိကျိဆံပင်ရန်။ ငါသည်ဤအားဖြင့်သရဲခြောက်တယ်လို့ခံခဲ့ရပေမယ့်ဖြေရှင်းပေးဖို့ဘယ်လိုမသိခဲ့ပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာယောက်ျားလေးအနည်းငယ်ယခု မှစ. ငါသည်ခဲ့သောဆံပင်။ သူတို့မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့နားရွက်ကျော်ဆံပင်ချင်တယ်။ ကျွန်မထက်ပိုတစ်ချိန်ကကြီးမားရှိခြင်းနှင့်သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနီရောင်ခဲ့ကြသည်ဒါငါ့အ "ရဲဘော်ရဲဘက်" သူတို့လက်ချောင်းများနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှကနေသူတို့အပျေါမှာပါးရိုက်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်နားရွက်ပြူးဘို့အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ဆံပင်ကတော်တော်လေးမဟုတ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ချောကျိကျိနှင့်အဆီခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့် lank နှင့်ရုပ်ဆိုးချချိတ်ဆွဲနှင့်နားရွက်ဝန်းကျင်။ ငါသည်ငါ့ lank ဆံပင်များကညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရသောအရာကိုစေသော
ကဆြုံးအစွန်းဆီသို့ဦးတည်အေးဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါကျောင်းမှအတွက်ဂျာမန်မောင်နှမစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေး။ သူတို့ဟာငါ့အဘို့မှတ်တိုင်မှာဘတ်စ်ကားပေါ် step ။ သူတို့ကိုငါသတိထားမိအဖြစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆွီဒင်နိုင်ငံသားများထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးရှည်လျားပြီးဒဏ်ငွေကျစ်ခဲ့နှင့်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရာသီဥတုကအေးလာပြီခံခဲ့ရသော်လည်းဘောင်းဘီတိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်တောင်သူတို့ကျောင်းဘတ်စ်ကားများတွင် lank ချောကျိကျိဆံပင်နှင့်အတူကောင်လေးအတူတူထိုင်ချင်တယ်။ ငါလာမယ့်အမတ်နေရာလစ်လပ်ခဲ့တာမှတ်မိပေမယ့်သူတို့ကဘတ်စ်ကား၏နောက်ကျော၌ထိုင်တော်မူ၏။ ငါ teased ကြောင့်သူတို့ mih နှင့်အတူအသင်းအတွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အနိုင်ကျင့်ခံရဒါကြောင့်ထင်။
ငါဆဋ္ဌမတန်းပြီးဆုံးသည့်အခါငါမကောင်းဘူးလို့ ratings ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဒါ cowed နှင့်အနိုင်ကျင့်ခဲ့လို့ငါ Torpa ကျောင်းမှာကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲဘူး။ အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုဖိနပ်ဆင်းကျင်းပ, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာမရခဲ့သည်သာ။ ကြောင်း၏ငါလွှတ်ငါ့အတှကနေရနိုင်သောကြောင့်, ငါသူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်ပိုသည်ဖြည်းဖြည်းအရှိန်အဟုန်ကိုဖတ်ဘယ်မှာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလူတန်းစားအတွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါကငါ့အဘို့အလွန်ကောင်းစွာသွားလေ၏။ ကျွန်မအတန်းအတွက်အလွန်ကောင်းစွာအပေါ်ရတယ်ကြောင့်ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်မူသောငါ့အတန်းဖော်များ၏အဘယ်သူအားမျှခဲ့သည်။ အားလုံးသူတို့အချို့သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသိရန်ရတယ်နှင့်အတူ socialized ကြသည်မဟုတ်လျှင်ပင်, မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကိုလည်းအချိန်ကဒါဘုံမဟုတ်ခဲ့သောလူတန်းစားတချို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ထက်အသက်နှစ်နှစ်ကြီးဖြစ်သောလေဗနုန်တောတစ်ခုမှာ, တူရကီအနေဖြင့်တဦးတည်းနှင့်ဂရိနိုင်ငံအနေဖြင့်တဦးတည်း။ အဲဒီမှာသူတို့နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာဘယ်တော့မှခဲ့ကြပြီး teased မဟုတ်သလိုမည်သူမဆို။
ငါအကြာတွင်9တန်းအတွက်အထက်တန်းကျောင်းကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့သကဲ့သို့ငါလူတန်းစားအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အပျမ်းမျှ 4.7 ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခြိနျမှာသူတို့ကကျောင်းကတစ်ငါးအချက်စကေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ပဉ္စမနေရာကအကောင်းဆုံးခဲ့စဉ်တစ်ခုမှာ, အဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်ဒါကြောင့်သူကတခြားအတန်းကနေကျောင်းသားများကိုရှိခဲ့သည်မူသောငါ့အတန်းထဲတွင်တဦးတည်းရှိမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်။ Stefan တစ်ဦးရှည်လျားသောဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေဆံပင်ရွှေရောင်ကောင်လေးက, ငါ့ကို bully ဖို့တာဝန်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သူကပတ်ပတ်လည်ကျောင်းသားအားလုံးကြားနိုင်အောင်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့စကားအော်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာအရှက်နှင့်ရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူပြုအဘယ်ကြောင့်ငါမသိရပါဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ ဒါဟာငါ့အတွေအများကြီးခဲ့ငါအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးအပ်သည်။ ငါအရာအားလုံးထက်မသိဒါကြောင့်ကျ၌ထစိုက်ပျိုးပထမဦးဆုံးအခိုက်အထဲကနေခဲ့ရသည်။
ကျွန်မအထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးခဲ့ပွီးနောကျ, သူအဖြစ်မကြာမီသူဘယ်နေရာမှာမဆိုငါ့ကိုမြင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုဆက် bully နိုင်ခဲ့သည်။ သူကဒါပြုမူအဘယ်ကြောင့်ငါနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
ငါလမ်းမပေါ်တွင်လှည့်လည်သည့်အခါကျွန်မလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်မူသောငါ့ကျောင်းအချို့ကျောင်းသားများကတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါလမ်းညွန်အဘို့ထိုသူတို့မေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူတို့ကငါကြည့်ဘယ်လိုပျောက်နှင့်မသေချာသတိပြုမိကြရပါမည်။ ချက်ချင်းနီးပါးသူတို့ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုမာရ်နတ်နှင့် bully မှစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့မှာလည်းကျောင်းများ၏အနာဂတ်၌ငါ့ကိုပဌနာမှလာသော "အားလျော့" ငါ့ကိုခေါ်လေ၏။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျနော်ကျောင်းတက်ရသွားပါလိမ့်မယ်လို့ညာဘက် rktingen ထွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ပြသည်။ ငါမတှေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သညျငါ့ကိုပေါ်ကောက်မယ်လို့ဘာလို့ငါနားမလည်နိုင်ဘူး။ ငါခဲသူတို့ကိုသိတယ်။
အပိုင်း 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vecka 30, onsdag 24 juli 2019 kl. 09:31